Sat, Jan 20, 2018 शनिवार, माघ ६, २०७४
रत्न प्रजापति आइतवार, असार ४, २०७४ 2957 पटक पढिएको
उमेरले १० वर्षकी निर्मलाको पिठ्यूँमा ३० किलोको भारी थियो । त्यो उनको शरीरको तौलजत्तिकै थियो । भारी बोकेर खोलीको उकालो चढ्दा उनलाई निकै सकस भइरहेको थियो । जीउभरि खलखली पसिना बगिरहेको थियो । उनको निधारबाट पसिनाको धारा नै छुटिरहेको थियो । एक हातले थाप्लोको नाम्लो र अर्को हातले लौरी टेकेर उनी उकालो चढ्दै थिइन् ।
भारी बोकेर उकालो चढ्दा श्वास फुलेर उनको ज्यानै जाला जस्तो भइरहेको थियो । तर निर्मलाले पटक्कै दुःख मानेकी थिइनन् । त्यो भारी उनलाई आफ्नो सपनाको भारी जस्तै लागिरहेको थियो । भारी बोकेर कमाएको पैसाले किताब, कापी र कलम किन्ने र स्कुलको खर्च पुर्‍याउने, अनि धेरै पढेर धेरै नाम र दाम कमाउने उनको सपना थियो ।
निर्मलाको पछिपछि थिए निर्मलाजस्तै आधा दर्जन केटाकेटी । १२ वर्षकी चाँदनी, ११ वर्षकी सिर्जना, अर्की १२ वर्षकी मेलिना, १३ वर्षकी शान्ति, १४ वर्षकी सुशीला र १० वर्षकी सुनीता । उनीहरू पनि आफ्नो शरीरको तौलजत्तिकै भारी बोकेर ठसठस कन्दै खोलीको उकालो चढ्दै थिए । उनीहरूका पनि निर्मलाका जस्तै सपना थिए ।
तर दुःखको कुरा छ । उनीहरूले त्यसरी भारी बोकेर दुःखले कमाएको पैसा सबै आफूखुसी खर्च गर्न पाउँदैनन् । त्यही पैसाले उनीहरूका बाबुआमाले रक्सी किनेर खान्छन् । ओहो, कस्तो नराम्रो बानी । आफू पनि केही नगर्ने । उल्टै केटाकेटीले कमाएको पैसा रक्सी खाएर सिध्याउने । कस्तो नराम्रो चलन ।
उनीहरू नेपालको सुदूरपश्चिमको बझाङ जिल्लाको थलारा गाउँपालिकामा बस्ने बादी समुदायका बालबालिका हुन् । बिदाको बेला यसरी भारी बोकेर खोलीको उकालो चढ्नु उनीहरूको दैनिकी नै हो । उनीहरू दिनहुँ बिहान सबेरै एकदुई घण्टा ओरालो हिँडेर झनाना बजार पुग्छन् । अनि आफ्नो शरीरले सके जति सामानको भारी बोकेर तीनचार घण्टा लगाएर खोलीको उकालो चढ्छन् ।
केही समयअघिसम्म त्यस गाउँका बादी समुदायका मानिस गाउँमा नाचगान गरेर र माटाका भाँडाकुँडा बनाएर जीविका चलाउँथे । तर पछिल्लो समय गाउँगाउँमा मनोरञ्जनका साधन पुगे । उनीहरूको नाचगान हेर्ने कोही भएनन् । उनीहरूको नाचगान हेरेर उनीहरूलाई पैसा, खाद्यान्न र लत्ताकपडा दिने पनि कोही भएनन् ।
आधुनिक प्रविधिले बनेका सरसामान घरघरसम्म पुग्न थालेपछि बादीहरूले बनाएका माटाका भाँडाकुँडा पनि बिक्न छोड्यो । अनि उनीहरूको पेसा नै संकटमा पर्‍यो । उनीहरूको जीविका नै कठिन हुन थाल्यो । आफ्नो खेतबारी नभएकाले काम गरी खान पनि पाएनन् । अनि उनीहरूका बाबुआमा गाउँगाउँमा गएर मागेर केही नगद, खाद्यान्न र लत्ताकपडा जुटाउन थाले । तर त्यस्तो गरिबीको अवस्थामा पनि रक्सी खान भने कसैले छोडेनन् ।
अरू गाउँका केटाकेटीहरू झोला बोकेर उफ्रिँदै रमाउँदै स्कुल गएको देखेर निर्मला, चाँदनी, सिर्जना, मेलिना, शान्ति, सुशीला र सुनीतालाई पनि त्यसैगरी स्कुल जान मन लाग्थ्यो । उनीहरू जस्तै पढेर राम्रो मान्छे र ठूलो मान्छे बन्ने सपना उनीहरू पनि देख्थे । तर उनीहरूसँग स्कुल जान किताब, कापी र कलम थिएन ।
उनीहरूका बाबुआमाले पनि किनिदिन सक्दैनथे । किनभने उनीहरूको कमाइ नै थिएन । गाउँघरमा मागेर अलिअलि कमाए पनि रक्सी खाएरै सक्थे । त्यसैले उनीहरूले भारी बोकेर पैसा कमाउने उपाय सोचे । अनि भारी बोक्ने कोही ठूला मान्छेको पछि लागेर गाउँका साहु र व्यापारीका सामान बोक्न थाले । अनि भारी बोकेर कमाएको पैसाले किताब, कापी र कलम किनेर स्कुल जान थाले । यो वर्षको शैक्षिक सत्र सकियो ।
उनीहरूले कक्षा चढे । तर नयाँ किताब, कापी र कलम किनेका छैनन् । स्कुलको ड्रेस पनि सिलाएका छैनन् । त्यसैले अब फेरि नयाँ किताब, कापी र कलम किन्न र स्कुलको ड्रेस सिलाउनका लागि पैसा कमाउन उनीहरू व्यापारी साहुको भारी बोक्दै थिए ।
म सहरबाट गाउँ घुम्न जाँदा बाटैमा उनीहरूसँग भेट भयो । उकालो चढ्दाचढ्दा थाकेर भारी बिसाइरहेका रहेछन् । १० वर्षकी सानी निर्मला अरूभन्दा फरासिली रहिछन् । धक नमानी बोल्दिरहिछन् । अरू चाहिँ लाजले मुख छोप्दा रहेछन् ।
'यति सानो उमेरमा किन भारी बोक्न थालेको ? ' मैले सोधेँ ।
'हामीले भारी नबोके खान पाइँदैन ।' निर्मलाले निधारको पसिना पुछ्दै भनिन् ।
'अनि स्कुल जानुपर्दैन त ? ' मैले फेरि सोधेँ ।
'जानुपर्छ । बिदामा मात्रै भारी बोक्ने हो ', निर्मलाले फेरि गालाको पसिना पुछ्दै भनिन् ।
'अनि तिमीहरूको बुबाआमा चाहिँ के गर्नुहुन्छ नि ? ' मैले एकछिन रोकिएर फेरि सोधेँ ।
'कहिले रक्सी खाएर घरमै बस्नुहुन्छ । अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ गाउँमा माग्न जानुहुन्छ ।' निर्मलाले अलिकति लजाउँदै भनिन् ।
उनीहरू फेरि भारी बोकेर हिँड्न थाले । म पनि उनीहरूको पछिपछि लागेँ ।
'तिमीहरूले कमाएको पैसाचाहिँ के गर्छौं नि ? ' हिँड्दाहिँड्दै मैले सोधेँ ।
'बुबाआमाले लिनुहुन्छ । अलिअलि चाहिँ लुकाएर राख्छौं । किताब, कापी र कलम किन्नलाई चाहिन्छ नि', यसपटक चाँदनीले भनिन् ।
'बुबाआमाले चाहिँ काम गर्नुहुन्न त ? '
'अहँ, गर्नुहुन्न । रक्सी खाएर मातेर बस्नुहुन्छ ।'
'किन नि ? '
'हामीले भारी बोकेर हाम्रा बुबाआमालाई पाल्यौं । अब तिमीहरूले हामीलाई पाल्नुपर्छ । तिमीहरूलाई तिमीहरूका छोराछोरीले पाल्नेछन् भन्नुहुन्छ', शान्तिले भनिन् ।
'ओहो, कस्तो नराम्रो सोचाइ । अनि रक्सी खाएर मातेर बस्ने कस्तो नराम्रो बानी । यस्तो सोच्नु हुँदैन । काम त सबैले गर्नुपर्छ । अनि रक्सी खाने बानी पनि छोड्नुपर्छ । अब तिमीहरूले नै बुबाआमाको काम नगरी बस्ने र रक्सी खाने बानी छुटाउनुपर्छ ।
मैले यस्तो भनिरहँदा सानी बहिनी निर्मला निकै गम्भीर भइन् । सायद उनले मनमनै केही सोचिन्, तर केही बोलिनन् । चुपचाप हिँडिरहिन् ।माथि चौतारीमा पुगेर भारी बिसाइन् । अनि मतिर हेरेर भनिन्, 'अब हामी बुबाआमाको रक्सी खाने बानी छुटाउने कोसिस गर्छौं ।' यसो भनिरहँदा निर्मलाको अनुहार निकै उज्यालो भएको थियो ।
म अर्को पटक थलारा गाउँमा पुग्दा निर्मला, चाँदनी, सिर्जना, मेलिना, शान्ति, सुशीला र सुनीता हातमा किताब र कापी च्यापेर रमाउँदै र उफ्रिँदै थलारा उच्च माध्यमिक विद्यालयतिर जाँदै थिए । अनि उनीहरूका बुबाआमा चाहिँ भारी बोकेर झनाना बजारबाट गाउँ फर्कंदै थिए । त्यो देखेर मलाई निकै खुसी लाग्यो । किनभने उहाँहरूले बोकेको भारीमा पनि आफ्ना छोराछोरीलाई पढाएर राम्रो र ठूलो मान्छे बनाउने सपना थियो ।
सपनाको भारी गरुंगो हुँदैन, हलुको हुन्छ । सुखको भारी हलुको हुन्छ । दुःखको भारीमात्रै गरुंगो हुन्छ ।
बुबाआमाको रक्सी खाने बानी छुटाउन के गरे त उनीहरूले ? मलाई जान्ने उत्सुकता लाग्यो र सोधें, 'कसरी तिमीहरूले बुबाआमाको रक्सी खाने बानी छुटायौ त ? '
'एक दिन हामी सबैले आआफ्नो बुबाआमासँग घुर्की लाउने सल्लाह गर्‍यौं', निर्मलाले भनिन् ।
'कस्तो घुर्की ? ' मलाई जान्ने खुल्दुली लाग्यो ।
'रक्सी खाने घुर्की । भन्यौं, तपाईंहरू रक्सी छोड्नुहुन्न भने हामी पनि रक्सी खान्छौं ', सिर्जनाले भनिन् ।
'अनि त्यसपछि... ? ' मेरो खुल्दुली झन् बढ्यो ।
त्यसपछि उहाँहरूले भन्नुभयो, ' तिमीहरूले रक्सी खानुहुन्न ।' 'अनि हामीले खान नहुने रक्सी तपाईंहरूले चाहिँ किन खानुभयो त भनेर भन्यौं । त्यसपछि उहाँहरूको चेत खुल्यो । अनि रक्सी खान छोड्नुभयो । अहिले त हाम्रो सट्टा उहाँहरू आफैं भारी बोक्नुहुन्छ ', चाँदनीले खुसी हुँदै भनिन् ।
सुनेर मलाई पनि खुसी लाग्यो । कहिलेकाहीँ केटाकेटीको घुर्कीले पनि राम्रै परिणाम दिँदोरहेछ । अब निर्मला, चाँदनी, सिर्जना, मेलिना, शान्ति, सुशीला र सुनीताको सपना क्रमशः पूरा हुँदैछ ।
आइतवार, पुस २३, २०७४ थोमस अल्बा एडिसन : आविष्कारको अर्को नाम
मधेसी नेताद्वारा बलिदानीको बेवास्ता 240
धनकुटामा 'निषेधाज्ञा' र 'आमहड्ताल' जारी 911
‘गुटको सल्लाहमा चले देउवा’ 1384
मापदण्ड विचार नगरी अस्थायी मुकाम र प्रमुख ताेकिए 7965
संघीयता एकातिर, दलहरू सडकतिर 1735
अझै सात लाख भूकम्प प्रभावित परिवार छानोबाहिर 667
यस्तो हुनुपर्छ प्रदेश सरकारको नेतृत्व 363
परीक्षामा प्रदेश सरकार 470
ट्रम्पको एक वर्ष : अलोकप्रियतामा एक नम्बर 598
डेढ लाख सेवाग्राहीले अझै पाएनन् ‘स्मार्ट कार्ड’ 110
सुमोको ठक्करबाट एकको मृत्यु 140
कालिकोटमा निमोनियाले एकै टोलका तीन शिशुको मृत्यु 136
गुड्दैन फूलमायाको रिक्सा 320
विराटनगरमा व्यवसायीमाथि साङ्घातिक आक्रमण 1017
जिससको भवनमा मुख्यमन्त्रीको कार्यालय 340
टेलिकमको आम्दानी पाँच गुणा बढ्यो 1060
चीनले बनायो हावा सफा गर्ने विश्वकै अग्लो टावर 3144
वेबबेस मोबाइल आईएमईआई दर्ता कार्यान्वयनमा लगिँदै 563
केही घण्टामै डुब्यो फेसबुकको २५ अर्ब डलर 8428
भित्रियो चिनियाँ इन्टरनेट, तोडियो भारतीय एकाधिकार 2348
१३ वर्षीय केल्भिनले बनाए ड्रोन 1950